Bokeh एक सामाजिक नेटवर्क हो कि एक महिना मा |3को गोपनीयता मा केन्द्रित क्रिएटिव अनलाइन
Bokeh छविहरू साझा को कार्य मा केन्द्रित एक नयाँ सामाजिक नेटवर्क हो निजी रूपमा यो अर्को इन्स्टाग्राम हुन सक्छ? भन्न गाह्रो छ, तर त्यहाँ सधैं सम्भावना हुन्छ कि एक दिन प्रयोगकर्ताहरू एक बाट अर्कोमा सारिनेछन् यदि सबै कुरा यसलाई गराउनका लागि दिइयो भने।
हामी फोटो साझा गर्न मा ध्यान केन्द्रित एक सामाजिक नेटवर्क को सामना गरिरहेका छौं र निजी हुनु मा; यो पूर्ण रूपमा विज्ञापनबाट पनि जान्छ (यद्यपि यो व्हाट्सएपको साथ पनि हुन्छ र हामी यसलाई छिट्टै हेर्नेछौं)। हुनसक्छ यो, बोकेह तपाईको रूचिको सामाजिक नेटवर्क हुन सक्छ, त्यसैले रोक्नुहोस्।
Bokeh छ एक सामाजिक नेटवर्क टिम स्मिथ द्वारा बनाईएको र त्यो केहि समस्याहरू सुधार्न आउँदछ जुन केहि प्रयोगकर्ताहरूसँग सामान्यतया सामाजिक नेटवर्कहरूसँग हुन्छ। समस्याहरू जस्तै विज्ञापनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै र कालसूचक रूपमा अद्यावधिकहरू र पोष्टहरू हेर्न सक्षम नहुँदा; यद्यपि सत्य बताउन ट्विटरले पहिले नै यो एक विकल्पको रूपमा अनुमति दिन्छ।
गोपनीयता बोकेहको हृदय हो, जस्तो कि पूर्वनिर्धारित यो यो परिभाषित छ। निस्सन्देह, हामीसँग हाम्रो सामग्री सार्वजनिक गर्न वा अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा यदि हामी इच्छा गर्दछौं भने यसलाई पारित गर्ने विकल्प छन एकै साथ हामीसँग हाम्रो आफ्नै अनुकूलित URL हुन सक्छ।
यदि हामी गोपनीयता बारे कुरा गर्छौं भने हामी के कुरा गर्छौं Bokeh प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्र्याक गर्न अनुमति दिदैन जब तपाईंको नाम खोजीमा प्रविष्ट गर्नुहोस्, तर हामीले तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम थाहा पाउनु पर्दछ यसलाई फेला पार्नको लागि। यसको अर्को हाइलाइटहरू यो हो कि यसले कहिल्यै देखाउँदैन कि अन्य प्रयोगकर्ताहरूमा तपाईंलाई कसले पछ्याउँछ, यो गोप्य नै रहनेछ।
र पहिलो नजरमा सबैभन्दा देखिने फरक त्यो हो Bokeh एक महिना costs3लागत। हो, एक सामाजिक नेटवर्क जुन तपाइँको गोपनीयता सुरक्षित गर्न को लागी भुक्तान गर्नु पर्छ। कसले जान्दछ कि यसले धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्दछ, किनकि तपाईंलाई साच्चै सामाजिक नेटवर्क हुन आवश्यक छ। यो २०१ of को अन्त्यमा उपलब्ध हुनेछ। हाम्रो लागि हामीसँग सँधै बेहनस हुनेछ.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » Bokeh, वा अर्को इन्स्टाग्राम के हुन सक्छ गोपनीयता मा केन्द्रित
नमस्ते शुभप्रभात! नयाँ अवसरहरूको अनुभवको लागि उत्तम विकल्प, यो अरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने बारेमा होइन, तर तिनीहरू नयाँ लक्ष्यहरू हुन्, तपाईंको लागि हाम्रो लागि।